पौष १५ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/पौष १५ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस
पौष १५ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस
939minutes read
व्यापार व्यावसायमा मन्दिा आउनेछ भने पुराना बाकी रहेका रुपैया पैसा नउठ्ने हुनाले आर्थिक व्यावस्थापन गर्न गाह्रो पर्नेछ । अध्ययनमा मन नजादा अरु भन्दा पछि परिनेछ भने नतिजा अरुकै पोल्टोमा पर्नेछ । आफन्त तथा दाजुभाईहरुले असयोग गर्नेछन् भने माया प्रेममा मनमुटाब सिर्जना हुनेछ । सरकारि स्रोत तथा पैत्रिक सम्पति प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला काम बिग्रने तथा जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन सक्छ ।
सार्है दुखद खबर!!वडा कार्यालयमा नै वडाध्यक्षको यसरी भयो दुखद निधन!!
बागलुङको ओडारमा भेटियो २५ नाल भरुवा बन्दुक
अन्ततः नवीन र प्रेमकुमारीको भयो सातबर्षपछि मिलन, नबिनले अबदेखी यस्तो नगर्ने (भिडियो हेर्नुस)